(src)="1.1"> Musuh Baru Hollywood : Korea Utara dan Cina
(trg)="1.1"> ဟော ​ လိ ​ ဝု ( ဒ် ) ​ ၏ အနာဂတ် ​ ရန်သူ ​ များ ၊
(src)="1.3"> Film tersebut digambarkan media Cina sebagai ' sebuah syuting ulang film yang menjelekkan Cina . '
(trg)="1.2"> မြောက် ​ ကို ​ ရီး ​ ယား ​ နှ ​ င့် တရုတ်
(src)="1.1"> Cina , Amerika Serikat : Jurang Perbedaan antara konsumen Cina dan Amerika
(trg)="1.2"> အမေ ​ ရိ ​ ကန် ​ ပြည်ထောင် ​ စု ၊
(src)="1.2"> David wetime dari Tea Leaf Nation menerjemahkan sebuah infografik yang memperlihatkan jurang perbedaan antara konsumen Cina dan Amerika .
(trg)="1.3"> တရုတ် ​ နှင့် အမေ ​ ရိ ​ က စား ​ သုံး ​ သူ ​ များ ​ အကြား ​ မှ ကွက်လပ်
(src)="1.1"> Deklarasi Kebebasan Internet
(src)="1.2"> Seperti yang sebagian besar kita ketahui , dunia kini tengah berada di dalam momen krusial dalam hal kebebasan Internet .
(src)="1.3"> Di banyak negara di dunia , hukum-hukum baru diciptakan untuk menyensor Internet , dan dalam waktu yang sama banya bloger semakin berada dalam posisi terancam akibat berbicara dengan leluasa .
(src)="2.1"> Dalam kurun satu tahun terakhir , berbagai organisasi di seluruh dunia bergabung bersama seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya berjuang demi kebebasan daring ( online ) .
(trg)="2.1"> ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို တိုက်ယူဖို့အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘယ်တုန်းကမှနဲ့ မတူတဲ့ ညီညွတ်ခြင်းမျိုးနဲ့ တူ ⁠ တူလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
(src)="2.2"> Mulai dari perjuangan melawan SOPA dan PIPA di Amerika Serikat hingga inisiatif global yang berhasil membunuh Perjanjian Perdagangan Anti-Pemalsuan ( ACTA ) , kita sudah mencapai semangat zaman dari kebebasan Internet dan keterbukaan .
(trg)="2.2"> SOPA နဲ့ PIPA ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဆန့်ကျင်တာကအစ တုပပစ္စည်း ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေး သဘောတူညီမှု ( ACTA ) ကို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အင်အားစုအထိ ၊
(src)="3.1"> Mangingat hal itu , sejumlah kelompok baru-baru ini berkumpul untuk menuliskan Deklarasi Kebebasan Internet , Global Voices Advocacy merupakan salah satu penandatangan inti .
(trg)="2.3"> ကျွန်တော်ကျွန်မတို့တွေ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို အာရုံဝင်စားခဲ့ကြပါတယ် ။
(src)="3.3"> Berikut , Anda dapat lihat terjemahan langsung dari teks asli Deklarasi .
(trg)="3.2"> Global Voices Advocacyကလည်း ကနဦး လက်မှတ်ထိုးသူတွေမှာ တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
(src)="3.6"> Kami percaya bahwa Internet yang bebas dan terbuka dapat membentuk dunia yang lebih baik .
(trg)="5.3"> လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များနှင့် နိုင်ငံများကို ဤမူဝါဒများကို နားလည်သိရှိစေရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည် ။
(src)="3.8"> Kami percaya bahwa mereka dapat membantu meningkatkan kreativitas , inovasi dan masyarakat-masyarakat terbuka .
(src)="6.1"> Bergabunglah dengan kami menjaga Internet untuk tetap bebas dan terbuka .
(src)="6.3"> Kami berikrar untuk Internet yang bebas dan terbuka .
(src)="8.1"> Ekspresi : Jangan sensor Internet .
(trg)="14.6"> စောင့်ကြည့်နိုင် ၊
(src)="11.2"> Jangan cekal teknologi baru , dan jangan hukum sang pembaharu untuk hal-hal yang dilakukan oleh pengguna .
(trg)="15.2"> ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ဘဲ ဆန်းသစ်တီထွင် ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ကြရန် ၊
(src)="12.1"> Privasi : Lindungi privasi dan bela hak setiap orang untuk mengontrol bagaimana data dan peralatan milik mereka digunakan .
(trg)="15.3"> နည်းပညာအသစ်များကို မပိတ်ပင်ဘဲ ဆန်းသစ်ဖန်တီးသူများကို ၄င်းတို့ ၏ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို အပြစ်မပေးရန်
(src)="1.1"> Korea Selatan : Peluncuran Rating Video Musik Online yang Kontroversial
(trg)="1.1"> တောင် ​ ကို ​ ရီး ​ ယား ၊
(src)="1.2"> Pihak berwenang Korea Selatan meluncurkan sebuah sistem rating baru untuk video musik yang diposting secara online .
(trg)="1.2"> အငြင်း ​ ပွား ​ ဖွယ် အွန် ​ လိုင်း ​ တေး ​ ဂီ ​ တ ​ ဗီ ​ ဒီ ​ ယို သတ် ​ မှတ်ချက် ​ စနစ် စတင်
(src)="1.3"> Rancangan undang-undang baru ini mewajibkan semua video musik ( atau video promosi ) bahkan cuplikan film harus dirating dahulu sebelum diunggah .
(trg)="1.3"> တောင်ကိုရီးယား အာဏာပိုင်များသည် အွန်လိုင်းတွင်တင်နေသော ဂီတဗီဒီယိုများအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်အသစ်တစ်ခုကို စတင်လိုက်သည် ။
(src)="4.2"> RUU ini bahkan diterapkan pada klip-klip , yang bukan untuk organisasi nirlaba , serta berbagai cuplikan musik dan film .
(trg)="5.1"> ယခင်က ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများသာလျှင် ဂီတဗီဒီယိုများ ထုတ်လွှင့်ပြသမှုအတွက် တာဝန်ရှိခဲ့ပြီး ဥပဒေအသစ်မှာ ယူကျူ့ ၊
(src)="7.3"> Tertulis :
(trg)="7.3">0)
(src)="1.1"> Global Voices Bermitra dengan The Irrawaddy di Myanmar
(trg)="1.1"> Global Voices ( ကမ္ဘာ့အသံ ) မြန်မာနိုင်ငံမှ ဧရာဝတီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
(src)="2.1"> Akankah berjalan pemilu yang bersih dan adil pada bulan November nanti ?
(trg)="2.1"> နိုင်ဝင်ဘာလတွင် မျှတ ၍ သန့်ရှင်းသော ရွေးကောက်ပွဲများ ပြုလုပ်မည်လော ။
(src)="2.3"> Apa rencana untuk mencapai persatuan dan perdamaian di tengah konflik etnis dan agama ?
(trg)="2.3"> လူမျိုးနှင့် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ အကြား စည်းလုံးမှု နှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ရရှိရန် အစီအစဉ်များသည် အဘယ်နည်း ။
(src)="3.1"> Untuk meningkatkan liputan kami tentang apa yang terjadi di Myanmar saat ini , Global Voices telah bermitra dengan The Irrawaddy , sebuah organisasi media terkemuka di negara yang mengantarkan berita-berita alternatif .
(trg)="3.1"> မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့ ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြောင်းအရာများနှင့် ပက်သက်သော ကျွန်ုပ်တို့ ၏ သတင်းပေးပို့ချက်များ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ကမ္ဘာ့အသံသည် သမရိုးကျမဟုတ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးပို့နေသော မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ထိပ်တန်း မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော ဧရာဝတီ နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ပါသည် ။
(src)="4.1"> The Irrawaddy didirikan pada tahun 1993 oleh wartawan Burma di pengasingan di Thailand .
(trg)="4.4"> မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော သူများပါ၀င်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် ။
(src)="5.2"> Karena laporan mereka kritis , majalah itu dilarang oleh rezim militer di Myanmar dan siapa pun yang kedapatan menyimpannya bisa ditangkap dan dipenjarakan .
(trg)="5.2"> ဧရာဝတီ ၏ ဆန်းစစ်ဝေဖန်ရေးသားမှုများကြောင့် မြန်မာ စစ်အစိုးရမှ ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး မည်သူမဆို မဂ္ဂဇင်းအား လက်ဝယ်ရှိပါက ဖမ်းဆီးထောင်ချ ခံရနိုင်သည် ။
(src)="6.1"> Pada tahun 2000 , situs The Irrawaddy diluncurkan dan segera diblokir di Myanmar yang kemudian tidak dapat diakses di negara itu selama 11 tahun ke depan .
(trg)="6.1"> ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီ ၀က်ဆိုဒ်ကို စတင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အင်တာနက်တွင် ချက်ချင်း အပိတ်ခံခဲ့ရကာ ၁၁ နှစ်ကြာ ကြည့်ရှုရန် မရနိုင်ပါ ။
(src)="6.3"> Sementara itu , majalah cetak akhirnya didistribusikan secara legal di seluruh negeri pada tahun 2013 .
(trg)="6.3"> နောက်ဆုံး ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာတော့ ပုံနှိပ် မဂ္ဂဇင်းများသည် တရားဝင် ပြည်တွင်းတွင် ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည် ။
(src)="7.1"> Sejak didirikan , The Irrawaddy telah berkomitmen untuk menyodorkan kepada masyarakat berita-berita alternatif sebagai bagian dari posisi demokratis .
(trg)="7.2"> လွတ်လပ်သော စာနယ်ဇင်းသည် ဒီမိုကရေစီ ၏ မုချလိုအပ်သည်ဟု ဧရာဝတီမှ ယုံကြည်သည် ။
(src)="7.2"> Diyakini pers bebas sangat penting untuk demokrasi :
(trg)="7.3"> ကျွန်တော်တို့သည် ဒီမိုကရေဒီကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါသည် ။
(src)="7.3"> Kami memiliki keyakinan kuat dalam demokrasi , dan percaya bahwa tanpa pers bebas masyarakat demokratis tidak lengkap .
(trg)="7.4"> ထို့အပြင် လွတ်လပ်သော မီဒီယာမရှိပါက ဒီမိုကရေဒီ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်လည်း ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိပါ ။
(src)="7.5"> Sebagai bagian dari Global Voices , kami senang melakukan kemitraan ini karena itu kami berusaha untuk memberikan pembaca kami berbagai cerita yang lebih baik dan lebih inspiratif dari Myanmar .
(trg)="7.5"> လွတ်လပ်သော သတင်းလောကအား ထိန်းသိမ်းပြီး ဘက်လိုက်မှုနှင့် လွှမ်းမိုးမှုမရှိသော အမှီအခိုကင်းမီဒီယာကို ဖွံ့ဖြိုးရန် ပြုလုပ်ဖို့မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည် ။
(src)="1.1"> Penyebab Utama Kematian di Negara Berkembang yang Dapat Mengejutkan Anda
(trg)="1.1"> ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ သေဆုံးမှု ၏ အဓိက အကြောင်းတရားသည် သင့်ကို အံ့အားသင့် စေမည်
(src)="1.3"> Foto dari akun Flickr lepetitNicolas .
(trg)="2.2"> com ၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည် ။
(src)="1.4"> CC-BY-NC-SA 2.0
(trg)="2.3"> Ensia .
(src)="3.1"> Apakah penyebab utama kematian di negara berpenghasilan rendah dan menengah ?
(trg)="3.1"> ဝင်ငွေ အလယ်အလတ် နှင့် နည်းပါးသော နိုင်ငံများတွင် သေဆုံးမှု ၏ အဓိက အကြောင်းရင်းသည် ဘာပါလဲ ။
(src)="4.1"> A. malnutrisi
(trg)="5.2"> ငှက်ဖျားရောဂါ နှင့် HIV / AIDS
(src)="5.1"> B. tuberkulosis , malaria dan HIV / AIDS
(trg)="6.1"> ( ဂ ) ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု
(src)="6.1"> C. polusi
(trg)="7.3"> ညစ်ညမ်းသော မြေဆီလွှာ ၊
(src)="7.1"> Jika anda menerka jawaban " C " , anda benar .
(trg)="8.1"> ၄င်း စာရင်း အရေအတွက်ကို နောက်တစ်မျိုး စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုပါက ထို ၈ .
(src)="7.2"> Eksposur terhadap tanah , air dan udara yang tercermar ( untuk rumah tangga dan sekitarnya ) telah membunuh 8.4 juta orang di negara-negara tersebut pada tahun 2012 .
(trg)="8.2"> ၄ သန်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉ သန်း ဝန်းကျင်ထဲမှ အရေအတွက် ဖြစ်သည် ။
(src)="8.1"> Statistik lain yang layak direnungkan : 8.4 juta dari sekitar9juta orang di seluruh dunia meninggal karena polusi pada tahun 2012 .
(trg)="9.1"> အလုံးစုံ ခြုံကြည့်လိုက်မည် ဆိုပါက ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ( World Health Organization ) စာရင်းဇယား အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၅၆ သန်း သေဆုံးသည်ဟု ဆိုသည် ။
(src)="8.2"> Dengan kata lain , ini bukanlah masalah " negara kaya " .
(trg)="9.9"> စစ်ပွဲ တို့မှ အစ အခြား ဖြစ်နိုင်သမျှ အမှုမှုတို့ အဆုံး တကမ္ဘာလုံးပေါ်ရှိ သေဆုံးသူအားလုံး ပါဝင်သည် ။
(src)="8.3"> Ini adalah masalah yang dimiliki oleh negara berkembang .
(trg)="9.10"> သို့ဆိုလျှင် ပတ်ဝန်း ညစ်ညမ်းမှုသည် ထိုလူ ခုနစ်ဦးလျှင် တစ်ဦးနီးပါးမျှ သေစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ။
(src)="9.2"> Jadi , polusi menewaskan hampir satu dari tujuh diantaranya .
(trg)="10.2"> ၇ သန်းသည် ညစ်ညမ်းသော ပြင်ပ လေထုကြောင့်ဟု ဆိုနိုင်သည် ။
(src)="10.1"> Udara luar yang tercemar bertanggung jawab atas 3.7 juta kematian .
(trg)="10.5"> အခြား ၁ သန်း ဝန်းကျင်မှာတော့ ညစ်ညမ်းရေ ၊
(src)="10.3"> Sekitar 1 juta orang meninggal akibat bahan kimia serta air dan tanah yang terkontaminasi ; dan 840,000 meninggal karena buruknya sanitasi .
(trg)="10.7"> ၈ သိန်း ၄ သောင်း ဝန်းကျင်မှာတော့ ဆိုးရွားသော သန့်ရှင်းမှု ရေဆိုးနုတ်စနစ်များ ၏ အခြေအနေကို မလွန်ဆန်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည် ။
(src)="10.4"> Semua data tersebut berasal langsung dari situs dan database WHO , kecuali statistik mengenai tanah , yang bersumber dari angka terbaru ( kemungkinan lebih tepat ) dari Global Alliance for Health and Pollution .
(trg)="10.9"> မြေဆီလွှာ စာရင်း အချက်အလက်များ ( ပေါ့လျှော့တွက်ထားပုံရှိ ) ကိုတော့ Global Alliance for Health and Pollution ( ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု ပူးပေါင်းအဖွဲ့ ) ၏ လတ်တလော စာရင်းအသစ်များမှ ရယူထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
(src)="11.1"> Di tahun yang sama , 2012 , 625,000 orang meninggal akibat malaria , 1.5 juta orang akibat HIV / AIDS dan 930,000 orang akibat tuberkulosis .
(trg)="11.2"> ၅ သန်းသည် HIV / AIDS ရောဂါ နှင့် သော်လည်းကောင်း ၉၃၀၀၀၀ သည် အဆုတ်နာ တီဗီရောဂါကြောင့် သော်လည်းကောင်း သေဆုံးခဲ့သည် ။
(src)="12.1"> Perlahan dan tidak secara langsung
(trg)="12.1"> တဖြည်းဖြည်း မသိမသာ
(src)="13.1"> Penting untuk dicatat bahwa polusi jarang menewaskan manusia secara cepat atau langsung .
(trg)="14.5"> အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ သို့မဟုတ် ဝမ်းရောဂါတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည် ။
(src)="13.2"> Sebagai gantinya , polusi menyebabkan penyakit jantung , infeksi dada , kanker , penyakit pernafasan dan diare .
(trg)="14.6"> ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခု အဖြစ်နေပြီး ၊
(src)="13.3"> Polusi bertindak sebagai katalis , meningkatkan tingkat penyakit-penyakit tersebut diatas normal .
(trg)="14.7"> အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါများ ၏ ပုံမှန် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ဖြစ်သည် ။
(src)="13.4"> Atas alasan ini , WHO mempertimbangkan polusi sebagai faktor risiko — ancaman terhadap kesehatan manusia serupa seperti obesitas , merokok , malnutrisi atau kurangnya olahraga .
(trg)="14.8"> ထိုအချက်ကြောင့် WHOသည် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းခြင်းအား အန္တရာယ်ရှိ အချက်တစ်ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၄င်းအား အဝလွန်ခြင်း ၊
(src)="13.5"> Tapi polusi merupakan raja dari semua faktor risiko .
(trg)="14.9"> ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊
(src)="13.6"> Di seluruh dunia , jumlah kematian yang diakibatkan oleh faktor risiko lain mengecil di dalam konteks yang lain .
(trg)="14.12"> သို့သော် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုသည် ထို အန္တရာယ် အချက်များ ၏ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည် ။
(src)="14.2"> Walaupun begitu , coba imajinasikan skenario ini :
(trg)="15.2"> သို့ပေလည်း ဤလို အဖြစ်မျိုးကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ ။
(src)="15.3"> Belakangan ini , dia pulang ke rumah kemudian batuk berdarah .
(trg)="16.4"> သူက တစ်ပတ်နှင့် တစ်ပတ် ပိုပိန်လာပြီး ပိုပင်ပန်း လာသည် ။
(src)="15.4"> Dia terlihat lebih kurus dan lebih lelah tiap minggunya , anda ingin meminta ia untuk berhenti bekerja , tapi bagaimana anda bisa ?
(trg)="16.5"> ဒါကြောင့် သင် သူ့ကို ရပ်တန့်ဖို့ ပြောချင်ပေမဲ့လည်း သင်မည်သို့ ပြောနိုင်မလဲ ။
(src)="15.5"> Uang yang dia hasilkan adalah satu-satunya yang bisa memberikan makan kepada anak-anak anda .
(trg)="16.6"> သူ့ ချွေးနဲစာနှင့် ရှာထားသော တစ်ပဲတစ်ပြားဟာ သင့်ရဲ့ကလေးတွေကို ကျွေးနေသည့် တစ်ခုတည်းသော အရာဖြစ်သည် ။
(src)="16.3"> Anda mencoba menyaringnya dengan kain katun tipis , namun tidak banyak membuahkan hasil .
(trg)="17.3"> သင်သည် ပိတ်ပါးရေစစ်ဖြင့် စစ်သော်လည်း သိပ်များများ ကောင်းမလာချေ ။
(src)="16.4"> Sementara itu , pabrik yang bersebelahan dengan pemukiman kumuh anda , yang sebelumnya telah ditutup oleh pemerintah , mulai beroperasi kembali — tapi hanya di malam hari .
(trg)="17.4"> ဤအတောအတွင်း သင့် ၏ ဆင်းရဲသောရပ်ကွက်နားရှိ အစိုးရက လတ်တလော ချိတ်ပိတ်ထားသော စက်ရုံသည် ပြန်လည် လည်ပတ်နေသည် - သို့သော် ညဥ့်အခါမှသာ လည်ပတ်သည် ။
(src)="16.5"> Cerobong asapnya mengeluarkan asap tebal menyerupai ular , dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibakar .
(trg)="17.5"> ယင်း ၏ မီးခိုးခေါင်းတိုင်သည် မီးခိုးထူများ အုပ်လိုက် မှုတ်ထုတ်နေပြီး သူတို့ ဘာတွေကို ရှို့နေသလဲကို သင်မည်သို့မျှပင် မသိနိုင် ။
(src)="16.6"> Minggu lalu , anak sulung anda mulai batuk sepanjang malam .
(trg)="17.7"> သင် ၏ တခြား ကလေးများအားလုံးကတော့ ချူချာနေပြီး အခြေခံကျပြီး လွယ်ကူသော အယူအဆ များကိုပင် နားလည်သင်ယူဖို့ နှေးကွေးသည် ။
(src)="16.7"> Anak-anakmu mulai sakit-sakitan dan menjadi lambat untuk belajar walaupun hanya konsep dasar .
(trg)="17.8"> မိတ်ဆွေများ သို့မဟုတ် မိသားစုဆွေမျိုးများသည်လည်း သင့်ကို မည်သို့မျှ မကူညီနိုင် ။
(src)="16.8"> Tidak ada teman atau keluarga anda yang dapat menolong anda sejak saat itu , anehnya , hampir semua tetangga anda terkena masalah yang serupa .
(trg)="18.1"> ကျွန်တော်တို့ ၏ စီးပွားရေး စနစ်သည် တကမ္ဘာလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်သက်ရောက်နေသလို ၄င်းမှ ထုတ်ပေးသော ညစ်ညမ်းမှုများသည်လည်း ထို့အတူပင်ဖြစ် ၏ ။
(src)="17.1"> Ekonomi kita bersifat global dan begitu pula polutan yang dihasilkannya .
(trg)="19.2"> မျှော်လင့်ချက်လည်းမရှိ ဖြစ်သည် ။
(src)="18.1"> Anda adalah salah satu orang miskin yang teracuni , tanpa suara dan harapan .
(trg)="19.3"> ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ချမှတ်ပေးထားသော ဥပဒေများတော့ ရှိချင်ရှိမည် သို့သော် တခုကိုမှ ထိရောက်စွာ ကျင့်သုံးခြင်းလည်း မရှိ ။
(src)="18.2"> Regulasi yang mungkin bisa memberantas kondisi ini tidak pernah ditegakkan .
(trg)="19.4"> ရှိသမျှ အကုန် ကောက်သိမ်းပြီး တခြားမြို့သို့ ပြောင်းသွင်းရန်မှာလည်း မလွယ် ၊
(src)="18.5"> Setiap tempat berbagi keadaan buruk ini .
(trg)="19.7"> ကျေးရွာတိုင်းလိုလို ဤအခက်အခဲကို ထပ်တူခံစားနေရသည် ။
(src)="19.1"> Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini ?
(trg)="20.1"> ကျွန်တော်တို့ ဤပြဿနာကို မည်သို့ ဖြေရှင်းနိုင် မလဲ ။
(src)="20.1"> Ekonomi kita bersifat global dan begitu pula polutan yang dihasilkannya .
(src)="20.2"> Udara yang terkontaminasi dari Cina sekarang bisa diukur di negara lain .
(trg)="21.1"> ကျွန်တော်တို့ ၏ စီးပွားရေး စနစ်များသည် တကမ္ဘာလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်သက်ရောက်နေသလို ၄င်းမှ ထုတ်ပေးသော ညစ်ညမ်းမှုများသည်လည်း ထို့အတူပင်ဖြစ် ၏ ။
(src)="20.3"> Merkuri dari pertambangan emas dan batubara dapat ditemukan di ikan , dan arsenikum telah ditemukan didalam beras .
(trg)="21.2"> တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လွှတ်သော ညစ်ညမ်းသောလေထုကို ယခု အခြား နိုင်ငံများတွင် တိုင်းတာတွေ့ရှိပြီ ဖြစ်သည် ။
(src)="21.1"> Banyak industri berpolutan tinggi telah pindah dari negara maju ke negara miskin dengan sedikit regulasi lingkungan dan teknologi untuk mengelola dan memulihkan bahan kimia .
(trg)="21.3"> ရွှေတူးဖော်ခြင်း နှင့် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံများမှ ထွက်လာသော ပြဒါးများကို ကျွန်ုပ်တို့စားသုံးသော ငါးများတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး အာဆင်းနစ် ( အဆိပ်စိန် ) ကို ဆန်ထဲ ၌ တွေ့ရှိနေရသည် ။
(src)="21.2"> Teknologi bersih dan green growth adalah hal yang mungkin bagi negara-negara berkembang dan dapat mencegah kontaminasi di masa depan yang dapat menjangkiti kita semua .
(src)="21.3"> Negara-negara barat telah sukse dalam membersihkan polusi dan sekarang dapat mentransfer teknologi dan pembiayaan bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah .
(trg)="22.1"> ညစ်ညမ်းမှု အလွန်များပြားစွာ စွန့်ထုတ်သော စက်မှု လုပ်ငန်းကြီးများသည် ဓာတုပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲရန် နှင့် မြှပ်နှုံရန် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းဥပဒေများ ချမှတ်မှု အားနည်းပြီး နည်းပညာ နည်းပါးသည့် ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများသို့ ပြောင်းရွေ့ကြသည် ။
(src)="22.1"> Sangat penting untuk memastikan polusi termasuk dalam United Nations ' Sustainable Development Goals , yang melihat bagaimana mencapai pembangunan lestari di masa depan selepas berakhirnya Millennium Development Goals tahun ini .
(trg)="22.2"> စင်ကြယ်သော နည်းပညာများနှင့် အစိမ်းရောင် ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုသည် ထွန်းသစ်စ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံများအဖို့ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက အလားအလာရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို အန္တရာယ်ကျစေမည့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို လာမည့် အနာဂတ် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ကာကွယ်တားဆီးမည် ဆိုပါက ဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
(src)="23.3"> Kemungkinan alasan untuk hal ini adalah kurangnya kesadaran , serta tidak tahu harus dimulai dari mana untuk mengatasi masalah yang kompleks ini .
(trg)="23.1"> ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် ရှင်းလင်းသန့်စင်ရေးကို ဦးစားပေးပြုလုပ်ခြင်းသည် လူ့အသက်များကိုကယ်တင်ရုံတင်မက ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုလည်း လျော့ပါးစေပြီး ဇီဝမျိုးစုံ ထွေပြားမှုအား ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုလည်း လျော့ချ နိုင်လိမ့်မည် ။
(src)="24.1"> Sangat penting untuk memastikan polusi termasuk dalam United Nations ' Sustainable Development Goals , yang melihat bagaimana mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan selepas berakhirnya Millennium Development Goals tahun ini dan mengikutsertakan topik lain seperti pemberantasan kemiskinan , mempromosikan pertanian lestari , menjamin pendidikan yang adil , dan lainnya .
(trg)="23.2"> အဓိက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းကြီးများ ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ပါက ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုများ ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မထောက်ထားပဲ ၄င်းအပေါ် ဦးစားပေးမှု အလွန်နည်းပါးသည်ကို မြင်ရသည်မှာ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ် ဖြစ်ပါသည် ။
(src)="24.2"> Draf saat ini tidak mengikutsertakan sasaran untuk polusi secara mandiri , walaupun polusi termasuk dalam sasaran di bidang kesehatan .
(trg)="23.3"> ဤအချက် ၏ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ အကြောင်းအရင်းကတော့ အသိသတိနှိုးကြားမှု နည်းပါးတာ ဖြစ်နိုင်သလို ဤရှုပ်ထွေးသော ပြဿနာအစုံလိုက်ကို မည်သို့ စတင် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမည်ကို မသိခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည် ။
(src)="24.3"> Dalam teks — sub-goal 3.9 — saat ini berbunyi untuk mengurangi kematian dan kecacatan akibat dari berbagai tipe polusi .
(trg)="25.1"> ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များ ( United Nations ’ Sustainable Development Goals ) တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု ပြသနာကို ပါဝင်အောင်
(src)="25.1"> The Global Alliance on Health and Pollution sedang menggembleng sumber daya untuk membantu negara-negara berpendapatan rendah dan menengah untuk mengatasi masalah pencemaran yang menjadi prioritas .
(trg)="26.4"> ၉ ) သည် လောလောဆယ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု မည်သည့်အမျိုးအစားထံမှမဆို ဖြစ်ပေါ်လာသော သေခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုကို လျှော့ချရန် တောင်းဆိုထားသည် ။
(src)="26.1"> Teknologi dan pengetahuan untuk mengatasi ancaman kesehatan dan perekonomian semua terdapat di negara-negara kaya raya .
(trg)="26.5"> ဤစာများသည် နောက်ဆုံး အတည်ပြုမည့် စာတမ်းတွင် ပါဝင်ရန်လိုအပ်သည် ၊
(src)="26.2"> Solusinya dapat diimplementasikan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah untuk sebagian kecil dari biaya yang dikeluarkan di Barat dalam menangani warisan dari industrialisasi berbentuk polutan beracun .
(trg)="28.1"> ဤ ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး ခြိမ်းခြောက်မှုတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် နည်းပညာနှင့် အသိပညာများသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော နိုင်ငံများတွင် ရှိပြီးဖြစ်သည် ။
(src)="27.2"> Ini adalah masalah yang dapat diselesaikan dalam hidup kita
(trg)="29.2"> ယင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ တသက်တာအတွင်းမှာ ဖြေရှင်း ၍ ရသော ပြဿနာတစ်ခုသာ ဖြစ်သည် ။
(src)="1.2"> Mozilla L10N Hackathon di Punjab , India .
(trg)="1.2"> အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပန်ဂျပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Mozilla L10N Hackathon .
(src)="3.2"> Berikut adalah gambaran proyek mereka :
(trg)="3.2"> သူတို့သည် ထိုစီမံကိန်းကို ဤကဲ့သို့ ဖော်ပြထားပါသည် ။
(trg)="10.4"> # Check4Spam ( # သတင်းတုများစစ်ပါ )
(trg)="12.1">2သင် သံသယရှိသော အကြောင်းအရာကို ကူးယူပါ ။
(src)="8.1"> Sebuah keterangan khusus .
(trg)="8.2"> Image via Check4Spam Website .
(src)="9.2"> Shammas biasanya membaca pesan-pesan tersebut saat jam makan siangnya dan mulai meneliti petunjuk pesannya .
(trg)="10.1"> Check4Spam သည် ကိုယ်တိုင်ရရှိသောရန်ပုံငွေနှင့် လည်ပတ်ပါသည် ။
(src)="10.2"> 1 .
(src)="10.3"> Tambahkan + 9035067726 di telepon anda .
(trg)="11.1"> 1 သင့်ဖုန်းတွင် + 9035067726 ကို ထည့်ထားပါ ။
(src)="11.1">2.
(src)="11.2"> Salin isi berita yang anda curigai .
(trg)="13.1">3WhatsApp မှ တဆင့် ၎ င်းတို့ကို ပေးပို့လိုက်ပါ ။